I-Skydrive, isisombululo sezinkinga zethu zokuhambisana ne-Microsoft Office | Kusuka kuLinux
ISkydrive, isisombululo sezinkinga zethu zokuhambisana neMicrosoft Office
Njengoba ubona nge izindatshana zami zakamuva, muva nje bengicwaninga ukuthi ngisebenza kanjani namafayela kusuka ku- I-Microsoft Office futhi ngifinyelele esiphethweni sokuthi inketho engcono kakhulu ukusebenzisa I-Skydrive.
Iqiniso ukuthi, angikaze ngibe nentshisekelo kule nsizakalo, kuze kube manje lapho ngizithola ngisesidingo sokuthola isisombululo ezinkingeni zabo zokuhambisana namakhasimende ami.
Empeleni ngamangala, ngoba iyisevisi ephelele futhi ivumela imisebenzi eminingi. Kuyindlela enhle kunazo zonke kubantu abafayo abangama-90% abangadingi izici ezithuthuke kakhulu njengama-macros kanye nalezi zindaba.
Kulabo abadinga ukubuka kuphela idokhumenti bese beyiphrinta, kanye nerekhodi engizifaka kimi; Angikukhuthazi faka iMicrosoft Office 2007 usebenzisa iwayini kusukela I-Skydrive Inakho okudingekayo ukumboza izidingo zakho.
Ukuphrinta ifayili kufanele siqale ngokuliphrinta (ukulilayisha) nge-pdf evela eSkydrive bese siphrinta lelo fayela. khumbula ukuthi i-pdf ukubona ngeso njengoba usidalele kona kusuka I-Microsoft Office futhi asikho isidingo sokulanda amafonti noma lezi zindaba
Uma ufuna ukuyihlanganisa kancane emvelweni wakho, ungakha iskripthi sokuvula i-Skydrive njengokungathi uhlelo lokusebenza.
1. Wakha ifayela elibizwa nge- isibhakabhaka nalokhu okulandelayo
2. Sishintshela enkombeni lapho sigcina khona ifayili futhi silinikeze izimvume zokwenza
chmod +x skydrive
3. Sikopishela ku / usr / umgqomo /
cp skydrive /usr/bin
Sekwenziwe !! manje sesingayiqhuba kahle, ngokucindezela konke+f2 nokusebenzisa umyalo isibhakabhaka sengathi isicelo.
Ungangeza ngisho nakumenyu yakho, ukuze isondele kwezinye izinhlelo zokusebenza zehhovisi, bese ubeka isithonjana esibhakabhakeni kuso. lokhu okwedlule, kuziphenye ngokwakho ngoba angisafuni ukwengeza lokhu okuthunyelwe
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » ISkydrive, isisombululo sezinkinga zethu zokuhambisana neMicrosoft Office
Futhi kuthiwani ngeGoogle Drayivu?
I-Google Drayivu yinhle, kepha ayinayo ukuhambisana kwe-docx noma i-doc engu-100%. uma ufuna ukuwahlela kancane.
into ehlekisayo ukuthi i-Google Amadokhumenti inokuhambisana okungcono kakhulu kwe-docx kune-Libreoffice
Hahaha iqiniso impela
Ngifunde ukuthi indlela enzima, lapho ngilayisha i-CV yami futhi lapho nje ngiyilayisha kuGoogle Drive, wabeka amatafula kuyo.
i-google drive ikhahlela iskydrive kabili. kepha okuhlosiwe ukubuka imibhalo eyenziwe ngamafomethi we-microsoft anokuhambisana okungu-100%, lapho i-linuxero kufanele idonse isibhakabhaka. kumaphrojekthi amasha wokusebenzisana sebenzisa i-google drive, futhi akukho lutho lokunikeza imali iMicrosoft nge-360 yayo angazi ukuthi yini
Iphinde ingezwe njengezinhlelo zokusebenza zewebhu ku-Chrome
akuyona uhlelo lokusebenza, kuyisinqamuleli nje
Noma kunjalo, kuvela ukuthi kube wusizo kulabo abasebenzisa imibhalo ye-MS Office.
Ngokuqondile, njengoba usho, kumayelana nokwenza impilo ibe lula kumakhasimende ethu. emafasiteleni kufanele uchofoze kabili ukuvula i-.docx ngakho-ke noma isiphi isinqamuleli asisebenzi
Njengoba uzobona, ngisebenzisa windows kule pc, kepha angilisebenzisi ihhovisi likaMicrosoft, ngisebenzisa i-Openoffice, futhi ngisebenza ngesandiso sedokhumende esizenzakalelayo, hhayi nge-docx futhi, kusobala ukuthi ngisebenzisa nesiguquli sayo se-pdf esiyi kusebenza kakhulu.
Yebo, njengoba wenze ushintsho kusuka ehhovisi, kufanele wenze ushintsho ku-linux 😉
IMartial del Valle kusho
Kuhle kakhulu, ngiyabonga kakhulu ...
Phendula uMarcial del Valle
Ngiyajabula ukuthi uyithandile
Inkinga engiyibonayo ukuthi awukwazi ukusebenzisa ama-autoforms nezinye izici zokuqhafaza ngaphandle kokubhala umbhalo
kunjalo, njengoba ngikutshele ukuthi ayikho imisebenzi esezingeni eliphakeme kakhulu. ukusebenzisa i-skydrive kunesithakazelo esikhethekile kulabo abadinga kuphela ukubuka imibhalo, ukuyiphrinta nokuyihlela ezingeni eliphansi. Angilwenzi lolu hlobo lwe-athikili ukuze abantu baqhubeke nokuncika kumasevisi we-microsoft. Ngokuphambene nalokho, kufanele bathuthele ehhovisi elikhululekile, bese baqala ukubhala imibiko emisha ngqo bevela ehhovisi elikhululekile, bazi ukuthi imibhalo yabo yangaphambilini ingabukwa kusuka esibhakabhakeni
"Inkinga engiyibonayo ukuthi ngeke ukwazi ukusebenzisa ama-autoforms nezinye izici ezinemifanekiso kunokumane ubhale umbhalo"
I-Kur0tenshi, ngokunengqondo uBill Gates wayengeke anikeze izici ezifanayo kufomethi yefu neNks O okufanele uyithenge. Ukuthi baphila ngokumbalwa okuthengayo, ngicabanga ukuthi ezinye izinkampani. Isibonelo yi-Outlook kunezinkampani eziningi eziyisebenzisayo futhi ngiyaqonda ukuthi i-thunderbird ayifinyeleli kowodwa ...
Ngakho-ke ukuphonsa okuncane kulungile, uma kufanele uthumele i-cv enkampanini, okuhle ukukwenza nge-abiword / openoffice / Libreeoffice bese uyidlulisela ku-pdf. Enye into ukuthi ifomethi yamahhala ngokwesibonelo ama-google amadokhumenti ayifunda ngokumangazayo ngenkathi umbhali wokuthunyelwe ethi yizinto eziyisisekelo ngaphandle kwama-macro futhi akukho lutho.
Ngakho-ke ngicabanga ukuthi i-skydrive noma i-ms office web (noma ngabe yini ebizwa ngayo) kuningi ukuphuma ezinkingeni ngokushesha. Ngicabanga nokuthi kuma-netbook eza namawindi futhi angafuni ukushintsha uhlelo lokusebenza, kungcono ukusebenza kuwebhu kunokusebenzisa uhlelo. Okuthunyelwe okuhle !!!!!
Ngokuqondile, usizo lwe-skydrive kubasebenzisi be-linux ukubuka kahle imibhalo eyenziwe ngaphambilini ehhovisi le-microsoft, iphrinte futhi wenze izinguquko ezimbalwa. ngemibhalo emisha SICELA ukhohlwe nge-microsoft nehhovisi layo ukuthi okuwukuphela kwento esibangelayo yizinhlungu zekhanda, futhi uzivumelanise nalokho esinakho ku-linux. Singaqhubeka nokukhala ngoba asinayo inguqulo yendabuko ye-Microsoft Office noma sisebenzisa enye yezindlela eziningi esinazo ku-Linux ngombono wami enika iMicrosoft ukukhahlela okubili
Ngiyabonga ngolwazi lokuyilanda nge-PDF, njengamanje ngivivinya ihhovisi le-webapp.
Kuhle! Njengamanje ngicabanga ukuthi yisixazululo esihle sokuhambisana ne-doc ne-docx.
Sengivele ngibeke umshayeli weGoogle ngendlela efanayo.
Buah uthole okuthile okuhle! ngiyabonga !!!
Kuyindlela, inkinga enkulu ukuthi kufanele ulayishe amafayela akho efwini futhi angithembi okwakamuva ikakhulukazi.
Inyanga eyodwa neManjaro Linux
I-SWL Network (II): Ubuntu 12.04 ne-ClearOS. Ukuqinisekiswa kwe-LDAP